Iindaba - Yintoni umboniso opholileyo ?
counter top cooler
isikhenkcezisi esime nkqo
Yintoni isibonisi esipholileyo ?
Iikhabhathi zokubonisa ngomnye umboniso osetyenziselwa izinto zokubonisa.Imibala inegolide, isilivere emhlophe, i-matte emnyama, i-magenta, ingwevu kunye neminye imibala.Umboniso we-coolers showcase unenkangeleko entle, ulwakhiwo oluqinileyo, ukuhlukana ngokulula kunye nokuhlanganisa, kunye nokuhamba okufanelekileyo.Isetyenziswa ngokubanzi kwiiholo zemiboniso yenkampani, imiboniso, iivenkile zesebe, intengiso, njl., kwaye isetyenziswa ngokubanzi kwimisebenzi yezandla, izipho, ubucwebe, iifowuni eziphathwayo, iiglasi, iiwotshi, icuba, utywala, izithambiso kunye namanye amashishini.
I-ONRUN Electric Appliance (Huzhou) Co., ltd yimveliso yobuchwephesha yokuvelisa isiselo esipholileyo .thiywe njengengcaphephe yesisombululo esipholileyo kwesi siselo kwindawo yesiselo esifana neminyaka eyi-8, isiselo sethu sokupholisa sinoyilo olwahlukeneyo, sinohlobo oluthe tye. bonisa umboniso kunye nohlobo oluphezulu lweekhabhathi zokubonisa, umboniso wethu wesiselo unokusebenzisa ngokubanzi kwivenkile enkulu, ibha encinci, ikhitshi, ukubuyisela, ivenkile kunye nesipho sokuthengisa ishishini.
Ngokwesiqhelo ukubonisa isiselo esipholileyo sinoluhlu olubanzi lomthamo ukusuka kwi-20L ukuya kwi-400L yokuhlangabezana neetoti, iimfuno zesiselo sebhotile, ubushushu busuka ku-0C ukuya kwi-10C ukugcina imvakalelo epholileyo.
Kwaye iishelufu zinokulungelelanisa ngokwakho, ungabeka ubukhulu obuninzi obuxubeneyo, Yandisa indawo yokusetyenziswa kunye nomthamo weziselo.
Ngophuhliso loluntu, olu hlobo lwekhabhinethi yokubonisa alusebenzisi kuphela ivenkile kunye nemveliso yokubonisa njengenjongo, kwaye ibe yindlela entsha yokuthengisa l, ehambelana ngokusondeleyo nobomi bomntu.
Iimpembelelo ezibonakalayo eziziswe yimilo, imibala, kunye nezibane zidlale indima ebalulekileyo ekwandiseni intengiso kushishino lwesiselo.njengegama elithile elidumileyo, umzekelo kaCoco Cola, uPepsi, uEvian kunye nabanye bahlala benoyilo lwabo olulodwa, umbala, ukukhanya okukhokelwayo kunye i-pint logo yokuchukumisa umthengi, ukubamba amehlo abo ukuze bafumane ukuthengisa okulungileyo.
Ke ngoku isiselo sokubonisa okupholileyo kungekuphela nje iimveliso, kodwa kunye nophawu lwenkampani.
Ixesha lokuposa: Dec-07-2021
Ukusukela ekusekweni kwayo, umzi-mveliso wethu uphuhlisa iimveliso zodidi lwehlabathi ngokubambelela kumgaqo
yomgangatho kuqala.Iimveliso zethu ziye zafumana igama elihle kakhulu kwishishini kunye nokuthembeka okuxabisekileyo phakathi kwabathengi abatsha nabadala..
NO 9 xinghe road, yuyue town, deqing, huzhou city, zhejiang province, china